ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ (Top- 10) စာရင်ဝင်နိုင်ငံများ - Tameelay
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆယ်နိုင်ငံ
မုဒိန်းမှုဟာ လူသားတွေနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်လေ့ရှိတဲံ မှုခင်းတရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘအရပ်ရပ်ကလည်း အမျိုးသမီတွေ လုံခြုံရေးအတွက် တင်းကြပ်တဲ့ ပြစ်မှု ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ 10 နိုင်ငံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အီသီယိုးပီးယားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့ အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ 60 % လောက်ဟာ နှစ်စဉ် လိင်အကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်လို့ UN ရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ ဖော်ပြထားပါတယ်။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများစွာရှိပြီး အသက် 10 နှစ်လောက်ဆိုရင် ယောင်္ကျားပေးစားရတဲ့အထိ ကြောက်မက်ဖွယ် လိင်အကြမ်းဖက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
သီရိလင်္ကာဟာ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို လိင်အကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားအရ ယောင်္ကျား 14.5% ဟာ အကြမ်းဖက်မှုကိုပြုလုပ်နေကြပြီး တနှစ်မှာ 4.5% ပုံမှန် မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူတွေရဲ့ 96.5 % ဟာ လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ဥပဒေအနေအထားမှာ ရှိပြီး အမျိုးသမီး 64.9 % ဟာ နှစ်စဉ် မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားချင်း မုဒိန်းကျင့်မှု 11.1 % ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ်သေမှု အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာ ကနေဒါနိုင်ငံဟာ မုဒိန်းမှုပေါင်း 2,516,918 ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီး သုံးယောက်မှာ တယောက် မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတဲ့ စံနှုန်းဖြစ်ပြီး 62 % က မုဒိန်းသီးသန့်ကျင့်တာနဲ့ 9% က လူသတ်မုဒိန်းဖြစ်ပါတယ်။
1980 အထိ ပြင်သစ်မှာ မုဒိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲံ ဥပဒေမရှိသေးပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာမှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် ဥပဒေထဲ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနှစ်အတွင်း မုဒိန်းမှုပေါင်း 75000 နီးပါးရှိခဲ့ပြီး7နှစ်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်း မုဒိန်းမှု 3771850 ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Germany
ဂှာမနီမှာ မုဒိန်းကျင့်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး 240000 ခန့် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီဟာ မုဒိန်းအကျင့်ခံရမှု အများဆုံး နံပါတ်6အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာ မူဒိန်းမှုပေါင်း 6,507,394 ရှိတဲ့အထိ အခြေအနေဆိုးရွားခဲံတာဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာရှေ့ရောက်ပြီး လူဆန်တဲ့စိတ် နောက်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် ပုံရိပ်ကျဆင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်ဟာ တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေမယ့် လိင်အကြမ်းမှုနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှု အများဆုံးဖြစ်နေဆဲပါပဲ။အမျိုးသမီး5ယောက်မှာ 1 ယောက်နှုန်း မုဒိန်းကျင့်ခံနေရပြီး 16 နှစ်ကနေ 59 နှစ်အထိ ပစ်မှတ်ထားခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်း အမျိုးသမီး 400000 လောက်ဟာ မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကို မြို့အလိုက် ဖြစ်ပွားနှုန်း အများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ Bureau မြို့အတွင်းမှာပဲ တနှစ်အတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှု 24,923 ရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသား 98 ရာခိုင်းနှုန်းဟာ လိင်အကြမ်းဖက်ချင်စိတ်ပြီး 22 မိနစ်ခြားတခါ မုဒိန်းမှု ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာ လိင်အကြမ်းဖက်မှု အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဟာ ဆွီဒင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ 2009 ခုနှစ်မှာ မုဒိန်းမှု မှတ်တမ်း 15700 ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2008 ကထက် 8 % မြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပြီး ဆယ်နှစ်အတွင်း လိင်အကြမ်းဖက်မှု 58% တိုးလာတာကြဖစ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာ 2012 က မုဒိန်းမှုပေါင်း 65000 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က မုဒိန်းမြို့ပြတွေလို နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို မုဒ်ိန်းသမားတွေလက်ထျွှဲာ စွန့်လွှတ်ရတာအများဆုံးဖြစ်တဲံ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မုဒိန်းအကျဉ်းသား အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ စူပါ ပါဝါထဲမှာ မုဒိန်းမှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။အမျိုးသမီး9% လောက်က အမျိုးသားတွေကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး အမျိုးသား 91 %က အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လိင်တူမုဒိန်းကျင့်မှုတွေလဲ ရှိပြီး အမျိုးသမီ6းယောက်မှာ 1 ယောက် နှုန်းနဲပ မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာဖြစ်ပြီး အမျိုးသား 33 ယောက်မှာ 1 ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာပျေါမှာ မုဒိနျးမှု အဖွဈမြားဆုံးဖွဈတဲ့ ဆယျနိုငျငံ
မုဒိနျးမှုဟာ လူသားတှနေထေိုငျရာ ပတျဝနျးကငျြမှာ နှဈစဉျနှဈတိုငျးဖွဈလရှေိ့တဲံ မှုခငျးတရပျဖွဈပွီးတော့ ကမ်ဘအရပျရပျကလညျး အမြိုးသမီတှေ လုံခွုံရေးအတှကျ တငျးကွပျတဲ့ ပွဈမှု ဥပဒတှေေ ပွဌာနျးထားခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုပဲ ကမ်ဘာပျေါမှာ မုဒိနျးမှု အဖွဈမြားဆုံးဖွဈတဲ့ 10 နိုငျငံကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အီသီယိုးပီးယားဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ မုဒိနျးမှုဖွဈပှားတဲ့ အမွငျ့ဆုံးနိုငျငံတဈနိုငျဖွဈပါတယျ။အမြိုးသမီးတှရေဲ့ 60 % လောကျဟာ နှဈစဉျ လိငျအကွမျးဖကျခံနရေတယျလို့ UN ရဲ့ စဈတမျးတှအေရ ဖျောပွထားပါတယျ။အရှယျမရောကျသေးတဲ့ သကျငယျမုဒိနျးမှုမြားစှာရှိပွီး အသကျ 10 နှဈလောကျဆိုရငျ ယောကငြ်ျားပေးစားရတဲ့အထိ ကွောကျမကျဖှယျ လိငျအကွမျးဖကျခံနရေတာဖွဈပါတယျ။
သီရိလင်ျကာဟာ ပွညျတှငျးနဲ့ နိုငျငံခွားခရီးသှားတှကေို လိငျအကွမျးဖကျမှုအမြားဆုံးပွုလုပျတဲ့ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။တဈနိုငျငံလုံးအနအေထားအရ ယောကငြ်ျား 14.5% ဟာ အကွမျးဖကျမှုကိုပွုလုပျနကွေပွီး တနှဈမှာ 4.5% ပုံမှနျ မုဒိနျးမှု ကြူးလှနျနကွေတာဖွဈပါတယျ။မုဒိနျးမှု ကြူးလှနျသူတှရေဲ့ 96.5 % ဟာ လှတျမွောကျနိုငျတဲ့ ဥပဒအေနအေထားမှာ ရှိပွီး အမြိုးသမီး 64.9 % ဟာ နှဈစဉျ မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေတာဖွဈပါတယျ။ယောကျြားခငျြး မုဒိနျးကငျြ့မှု 11.1 % ရှိပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ သတျသမှေု အမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။
ခွောကျနှဈအတှငျးမှာ ကနဒေါနိုငျငံဟာ မုဒိနျးမှုပေါငျး 2,516,918 ရှိတဲ့ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။အမြိုးသမီး သုံးယောကျမှာ တယောကျ မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေတဲ့ စံနှုနျးဖွဈပွီး 62 % က မုဒိနျးသီးသနျ့ကငျြ့တာနဲ့ 9% က လူသတျမုဒိနျးဖွဈပါတယျ။
1980 အထိ ပွငျသဈမှာ မုဒိနျးနဲ့ ပတျသကျတဲံ ဥပဒမေရှိသေးပါဘူး။နောကျပိုငျးမှာမှာ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူတှရေဲ့ ဦးဆောငျမှုကွောငျ့ ဥပဒထေဲ ပါဝငျလာတာဖွဈပါတယျ။တနှဈအတှငျး မုဒိနျးမှုပေါငျး 75000 နီးပါးရှိခဲ့ပွီး7နှဈတာကာလအတှငျး စုစုပေါငျး မုဒိနျးမှု 3771850 ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။Germany
ဂှာမနီမှာ မုဒိနျးကငျြ့မှုကွောငျ့ အမြိုးသမီး 240000 ခနျ့ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ဂြာမနီဟာ မုဒိနျးအကငျြ့ခံရမှု အမြားဆုံး နံပါတျ6အဖွဈ ရပျတညျခဲ့ပွီး တဈနှဈအတှငျးမှာ မူဒိနျးမှုပေါငျး 6,507,394 ရှိတဲ့အထိ အခွအေနဆေိုးရှားခဲံတာဖွဈပါတယျ။နညျးပညာရှရေ့ောကျပွီး လူဆနျတဲ့စိတျ နောကျရောကျနတေဲ့ နိုငျငံအဖွဈ ပုံရိပျကဆြငျးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလနျဟာ တိုးတကျပွီးနိုငျငံကွီးဖွဈပမေယျ့ လိငျအကွမျးမှုနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ခွိမျးခွောကျခံရမှု အမြားဆုံးဖွဈနဆေဲပါပဲ။အမြိုးသမီး5ယောကျမှာ 1 ယောကျနှုနျး မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေပွီး 16 နှဈကနေ 59 နှဈအထိ ပဈမှတျထားခံနရေတာဖွဈပါတယျ။နှဈတိုငျး အမြိုးသမီး 400000 လောကျဟာ မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေတာဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုကို မွို့အလိုကျ ဖွဈပှားနှုနျး အမြားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။ Bureau မွို့အတှငျးမှာပဲ တနှဈအတှငျး လိငျအကွမျးဖကျခံရမှု 24,923 ရှိခဲ့ပါတယျ။အမြိုးသား 98 ရာခိုငျးနှုနျးဟာ လိငျအကွမျးဖကျခငျြစိတျပွီး 22 မိနဈခွားတခါ မုဒိနျးမှု ဖွဈနတောဖွဈပါတယျ။
ဥရောပနိုငျငံတှထေဲမှာ လိငျအကွမျးဖကျမှု အမွငျ့ဆုံးနိုငျငံဟာ ဆှီဒငျနိုငျငံဖွဈပွီးတော့ 2009 ခုနှဈမှာ မုဒိနျးမှု မှတျတမျး 15700 ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။2008 ကထကျ 8 % မွငျ့တကျသှားတာဖွဈပွီး ဆယျနှဈအတှငျး လိငျအကွမျးဖကျမှု 58% တိုးလာတာကွဖဈပါတယျ။
တောငျအာဖရိကမှာ 2012 က မုဒိနျးမှုပေါငျး 65000 ကြျောဖွဈပှားခဲ့ပွီး ကမ်ဘာပျေါက မုဒိနျးမွို့ပွတှလေို နာမညျကွီးခဲ့ပါတယျ။အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အပြိုစငျဘဝကို မုဒျိနျးသမားတှလေကျထြှဲာ စှနျ့လှတျရတာအမြားဆုံးဖွဈတဲံ နိုငျငံဖွဈပွီး မုဒိနျးအကဉျြးသား အမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျရဲ့ စူပါ ပါဝါထဲမှာ မုဒိနျးမှုလညျး ပါဝငျပါတယျ။အမြိုးသမီး9% လောကျက အမြိုးသားတှကေို မုဒိနျးကငျြ့ပွီး အမြိုးသား 91 %က အမြိုးသမီးတှကေို မုဒိနျးကငျြ့နကွေတာဖွဈပါတယျ။လိငျတူမုဒိနျးကငျြ့မှုတှလေဲ ရှိပွီး အမြိုးသမီ6းယောကျမှာ 1 ယောကျ နှုနျးနဲပ မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေတာဖွဈပွီး အမြိုးသား 33 ယောကျမှာ 1 ယောကျက မုဒိနျးကငျြ့ခံနရေတာဖွဈပါတယျ။
၈၄ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ဦး. ဆေးရုံပေါ်မှာ (၃) ရက်လုံးလုံး ဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်
ဘယ်လိုဆရာဝန်တွေလဲဗျာ…လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ…၈၄ နှစ်အရွယ် အဘိုးအိုတစ်ဦး . . .ဆေးရုံပေါ်မှာ ၃ ရက်လုံးလုံး ဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် ကျွန်တော့် အဖေ ၈၄ နှစ်ဟာ ပေါင်းရိုးကျိုးလို့. ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်ရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ရက်ကျတော့ အပြင်ဆေးခန်းက နေရထိုင်ရ ပို အဆင်ပြေနိုင်လို့ အပြင်ဆေးခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းကြပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး …
ဆာမန်ကူနမ်ရဲ့ဇနီးသည် ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြောလိုက်လည်းဆိုတော့…..
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်ဂူကယ်ဆယ်ရေးအတွင်းမှာ သေဆုံးသွားရှာတဲ့ ထိုင်းရေငုပ်သမားရဲ့ ဇနီးသည်က သူမရဲ့အမျိုးသားသေဆုံးမှုအပေါ်မှာ ကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ သေဆုံးသူ အသက်(၃၈)နှစ်အရွယ် ဆာမန်ကူနမ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရေတပ်မှ လက်ရွေးစင်အမှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂူတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်နေရင်းကြားထဲက ဆာမန်ကူနမ်တစ်ဦးတည်းသာ အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ …
မန္တလေးသူတွေ ကျွန်တော်….ကျွန်တော် နဲ့ ပြောကြတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ အခုမှပဲ သိတော့တယ်..။
မန္တလေးသူတွေ “ကျွန်တော်….ကျွန်တော်” နဲ့ပြောတာဘာကြောင့်လဲ ” အကြည်တော် “ပြောမှပဲသိရတယ်…….😄😆 မင်းတုန်းမင်းကြီပေါ့…သိကြတဲ့အတိုင်းမိဖုရား၅၀၀နဲ့စံစားတာလေ……ထို့အပြင်တောင်..၅၀၀နဲ့မလုံလောက်ပဲ…. သူစက်တော်ခေါ်နေတုန်အခန်းရှေ့ကခြေသံ ကြားတိုင်း.. “ဟဲ့..ဘယ်သူတုန်း;;;;” ဟုလှမ်းလှမ်းပြီမေးတယ်-ရံရွေတော်တွေက “ကျမပါရှင့်” ဆိုလျှင်..အသံသြကြီးနှင့် “ကျမဆို ဝင်ခဲ့လေကွယ် … ဟီးဟီး” လုပ်တတ်လွန်းတော့ ရံရွေတော်တွေလဲ စိတ်ညစ်ကြတာပေါ့……. မင်းကြီးရှေ့ခြေဖွဖွပင်ဖြတ်မလျှောက်ရဲ…လျှောက်လိုက်လို့ကျမ်းပြင်က”ကျွီ”ခနဲ မြည်သွားရင်တောင်,,,, “ဟဲ့ ဘယ်သူတုန်းးး” ဆိုပြီးမေးတော့ …